Qarax ka dhacay masjid ku yaala magaalada Addis Ababa ee xarunta dalaka Itoobiya – STAR FM SOMALIA
Qarax ka dhacay masjid ku yaala magaalada Addis Ababa ee xarunta dalaka Itoobiya
Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhaawacmay qarax xoogan oo Jimcihii shalay ka dhacay Masaajidka ugu weyn ee magaalada Addis Ababa, weli ma jirto cid sheegatay weerarkan.
Qaraxan ayaa la rumeysan yahay inuu ahaa mid loo adeegsaday bambaanada gacanta laga tuuro oo dadka lagu dhex tuuray xili laga soo baxay saaladii Jimce, sida ay dowlada Sheegtay. Ma jiraan weli wax dhimasho ah oo la xaqiijiyey walow ay jireen warar sheegaya in dhowr qof halkaasi ku dhimatay.
Caasimada Itoobiya ee Addis Ababa ayey inta badan ka dhicin weerarada qaraxyada ah maadaama dowlada ay gacan adag ku heyso amniga, balse waxaa todobaadyadii lasoo dhaafay jiray xiisad weyn oo ka dhex taagan dowlada Federaalka iyo Qowmiyada Oromiya oo ka horyimid qorshe lagu balaarinayo magaalada Addis Ababa.
Addis Ababa & Oromada
Magaalada Addis Ababa oo uu aasaasay Boqorkii hore ee Mililigii 2aad sanadkii 1886 uu deegaankaasi ka dhigtay saldhigiisa militari xili uu ku jiray olole uu ku qabsanayey dhulka Oromada.
Dowlada Federaalka Itoobiya ayaa dhawaan shaacisay in magaalada Addis Ababa la balaarinayo iyadoo la hoos keeni doono dhul badan oo ay degen yihiin Oromada oo degen dhulka ku hareeraysan caasimada Addis Ababa.
Xukuumada ayaa qorsheenaysa dhulka Addis Ababa lagu dari doono in loo qeybiyo dhul laga dhiso Warashado iyo dhul deegaan, iyadoo garab mareysa qorshihii hore ee ahaa in dhulka Oromada degto shacabka ku nool loogu bedalo magdhaw dhulka lagala wareegayo.
Qorshaha cusub ee Addis Ababa lagu balaarinayo ayaa la filayaa in Oromada ay ku weyso 36 magaalo iyo tuulooyinka ku hareeraysan caasimada arrintaasi oo keentay xiisada cusub.
Sadexdii todobaad ee lasoo dhaafay banaanbaxyo ka dhacay Itoobiya ayey ciidamada Booliiska ku dileen ugu yaraan 10 Arday kasoo jeeda Oromada oo ka qeyb qaadanayey banaanbaxyada looga soo horjeedo qorshaha dowlada la damacsan tahay dhulka Oromada.
Macada in qaraxa ka dhacay Masaajidka Anwar uu xiriir la leeyahay xiisada hada ka taagan deegaanka Oromiya, balse xiisadan ayaa ah mid dib usoo nooleysay kala shakiga ku dhexjira Muslimiinta oo u badan Oromada iyo Kirishtaanka ku nool dalka Itoobiya.
Baarlamaanka oo ansixiyay Sharciga iibka, qandaraasyada, iyo dheef Wadaaga qaranka
Baarlamaanka oo ka hor-yimid tallaabadii Guddoomiyaha G/Banaadir ku wareejiyay Ex Baarlamaan